ချစ်သူကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ | Bezzia
ချစ်သူကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 23/11/2021 22:41 | စိတ်ပညာ
မည်သည့် အလွဲသုံးစားမှု အမျိုးအစားကိုမဆို သံသယမရှိ၊ ဖယ်ရှားရန်အလွန်ခက်ခဲသော ဝေဒနာခံစားရသူတွင် ခြေရာရာများစွာ ချန်ထားခဲ့သည်။ လင်မယားကိစ္စတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များသည် များသောအားဖြင့် အထူးသဖြင့် ချစ်ရသူ သို့မဟုတ် ချစ်ရသူထံမှ လာသောကြောင့် ပိုမိုနက်နဲပါသည်။
လက်တွဲဖော်ကို စော်ကားခြင်းသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ နိဂုံးချုပ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့် အကျိုးဆက်တွေက ပိုကြီးပြီး ပိုလေးနက်ပါတယ်။
1 လင်မယားနှစ်ယောက် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု
2 အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ
3 အဲဒါကို ဘာလုပ်ရမလဲ
လက်တွဲဖော်ကို မတော်မတရားပြုခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုမှတဆင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။. ထိုသို့သော အလွဲသုံးစားမှုများကို အများအားဖြင့် ရှုတ်ချနိုင်သော အပြုအမူ သို့မဟုတ် အပြုအမူများ ဆက်တိုက် ဖော်ပြသည်-
မမှန်ဘူးဆိုတာကို မှန်မှန် ထောက်ပြတယ်။ ဒါက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားမှုနဲ့ ယုံကြည်မှု နှစ်ခုလုံးကို ပျက်ပြားသွားစေလိမ့်မယ်။
အဆက်မပြတ်ခြယ်လှယ်နေတာရှိတယ်။ စော်ကားခံရသူကို အပြစ်ရှိသည်ဟု ခံစားစေရန်။
အလွဲသုံးစားလုပ်သူသည် လက်တွဲဖော်နှင့် အလွဲသုံးစားလုပ်နေကြောင်း ဝန်ခံခဲပါသည်။ အလွဲသုံးစားလုပ်သူ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းကြောင့်ဟု သတ်မှတ်သည်။
လင်မယားနှစ်ယောက်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာမျိုး၊ မိသားစု သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများ၏ လက်အောက်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ အထီးကျန်မှု ရှိပါသည်။
လက်တွဲဖော်အပေါ် အလွဲသုံးစားလုပ်သူကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ သူသည် သူ့အာဏာရရန် လူတစ်ဦး၏ စုစုပေါင်း ဖျက်သိမ်းမှုကို ရှာဖွေသည်။
အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူညီကြပေမယ့် တူညီတဲ့ အချက်အချို့တော့ ရှိပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်အတွင်း အနိုင်ကျင့်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲများသည် အလွဲသုံးစားခံရသူ၏ မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုနှင့် လုံခြုံမှုအားလုံးထက် သက်ရောက်မှုရှိသည်။. မိမိကိုယ်ကို အထင်ကြီးလေးစားမှု ကင်းမဲ့ခြင်းသည် အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း သို့မဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကဲ့သို့သော အပြစ်အနာအဆာများနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုများကဲ့သို့သော အမျိုးမျိုးသော ခံစားချက်များ စတင်ပေါ်လာပါသည်။
အမျိုးသားများတွင်၊ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဇနီးဖြစ်သူ၏ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကို ခံယူရန် လူ့အဖွဲ့အစည်းက မပြင်ဆင်ထားသောကြောင့် ပြဿနာမှာ များသောအားဖြင့် ပိုကြီးသည်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲက ပိုလေးနက်ပြီး လေးနက်ပါတယ်။ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေထက်၊
သင်သည် အဆိပ်သင့်သော ဆက်ဆံရေးတွင် အပြည့်အ၀ရှိကြောင်း သဘောပေါက်ပြီး လက်ခံရန် လုံးဝမလွယ်ကူပါ။ ထိုညှဉ်းဆဲခြင်းသည် နေ့အလင်းရောင်၌ ဖြစ်၏။ အစပိုင်းတွင် စော်ကားခံရသူသည် ခံစားချက်များ ရောထွေးနေပြီး ကြမ်းတမ်းသော အဖြစ်မှန်ကို မမြင်နိုင်ပေ။ အထူးသဖြင့် ချစ်ရသူနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ထူထောင်ထားသည့်သူအကြောင်းကြောင့် ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ရန် အမှန်တကယ်ပင် ခက်ခဲပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ထိုသို့သော ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို အဆုံးသတ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ထိုသို့သောဆက်ဆံရေးကို အဖုအထစ်တွင် ဖြတ်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီကနေ၊ ပံ့ပိုးမှုကိုခံစားရပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ သင့်ကိုယ်သင်ထည့်ထားဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အကြာကြီး အလွဲသုံးစားလုပ်ခံရခြင်းက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ ပိုကြီးပြီး ကုသရခက်စေပါတယ်။ အချိန်တွေကုန်ပြီး အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်၊ လူတစ်ဦးသည် မိမိဘဝကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ပြီး တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ၊ စုံတွဲအဖြစ်ဖြစ်စေ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » စိတ်ပညာနှင့်စုံတွဲ » စိတ်ပညာ » ချစ်သူကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များ
Black Friday အတွင်း အဖြစ်အများဆုံး လိမ်လည်မှုများကို သတိထားပါ။
အလုပ်ပြီးရင် အိမ်မှာ အနားယူဖို့ စိတ်ကူး ၃ ချက်